Video: B2B Na-eduga Azụ na Mgbasa Ozi Bizo | Martech Zone
Video: B2B Na-eduga Azụ na Mgbasa Ozi Bizo
Thursday, July 25, 2013 Douglas Karr
Mgbe obula m na akowa ndi na akuko mgbasa ozi na ahia, a na m aju ako azu. Ọbụna anyị mepụtara ihe ọmụma maka ndị na-akwado anyị, Ikike na mmekọrịta, nke ahụ na-egosi ire ahịa ndụ n'ihe banyere ịkụ azụ.
Ihe m ji atụ ya bụ na mgbasa ozi bụ ihe omume, mana ahịa bụ atụmatụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkụ azụ, ị nwere ike tufuo ikpuru na eriri ebe ọ bụla… mana ahịa bụ mgbe ị na - eso ihu igwe, agụụ, ọnọdụ, omimi, na ihe ọ bụla ọzọ iji gbalịa chọta azụ kachasị!
Bizo mepụtara vidiyo a iji kọwaa otu ikpo okwu mgbasa ozi B2B ha si enyere ndị ahịa aka azụ maka kachasị mma na nke kachasị na-eduga:
Bizo bụ otu ndị ahịa B2B si amata ma rute ndị na-ege ha ntị na ntanetị. Ndị na-ege Bizo mere ka ihe karịrị nde ndị ọkachamara 120 gburugburu ụwa, gụnyere ihe karịrị 85% nke ndị ahịa azụmahịa nke US, ndị Platform Ahịa Bizo nwere ike kpachapụrụ ndị azụmaahịa site na njirisi omume igwe mmadụ.
Nchịkọta Ndị Na-ege Ntị - Akụkọ na-ekpuchi ngalaba ndị na-ege ntị na-eleta saịtị gị, otu esi eleta nleta ndị a na oge, yana etu azụmahịa gị si jiri saịtị ndị ọzọ tụnyere na netwọkụ Bizo. Ike nke ndi nleta na saịtị maka ahia di iche.
Ahịa na-elekọta mmadụ - Ike belata njikọ na ịkekọrịta / ịtọọ oge tweets ozugbo na ihe nchọgharị; Mkpado tweets site na isiokwu, ụdị ọdịnaya, na ndị ọzọ maka nyocha miri emi; nyefee onyinye na ịkwọ ụgbọala mgbe ị na-ekekọrịta ọdịnaya nke atọ. Sochie ntụgharị site na njikọ ejikọtara ọnụ na ọkwa tweet.
B2B Ngosipụta Mgbasa Ozi Ad - Mgbasa ozi ngosi ezubere iche nke data igwe mmadụ nke Bizo na / ma ọ bụ mgbasa ozi ngosi ezubere iche dabere na ndepụta aha ụlọ ọrụ akọwapụtara.
Mgbasa ozi mgbasa ozi - Gbasaa iru na netwọọdụ LinkedIn; ntughari ntughari na ọkwa ad; nkọwapụta / nchịkọta zuru ezu na mgbasa ozi ngosi ezubere iche na Facebook nke data ọnụọgụ azụmahịa nke Bizo na-eme.
Mgbanwe Ad - Zubere ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gara aga na mgbasa ozi ngosi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-pịa ndị na-ekekọrịta njikọ gị na mgbasa ozi ngosi, ma ọ bụ site na CRM site na ịnye Bizo na adreesị ozi-e ezoro ezo site na nchekwa data CRM gị.
Bizo si ndị ahịa na-eji njikwa data nke ikpo okwu na ike ezubere iche iru ndị na-ege ntị ebe ọ bụla ha na-aga n'ịntanetị ma soro ndị na-abịa na weebụsaịtị ha, peeji nke ọdịda, na ọwa mmekọrịta. Bizo enwetawo obi ike karịa ndị 600 SMB ndị ahịa na nnukwu ụdị ụwa gụnyere AMEX, Mercedes Benz, Monster, Salesforce.com, Porsche, Microsoft, AT & T, na UPS ndị na-eji Bizo na-emetụta ọ bụla nke ahịa na ahịa ahịa ha.
Kedụ Ka I Si Ele Ahịa Ọdịnaya?
Stratekọwa Usoro: Mee na Donts
Jul 29, 2013 na 5: 36 AM
Nnukwu oke ụdị ozi a dị ịtụnanya na-akwalite na blọọgụ gị. Daalụ maka ọtụtụ ihe okike ịkekọrịta echiche. Hụ ụdị isiokwu a n'anya na ihe niile. Nnukwu okekọrịta!